#clip #အစိုးရအကြမ်းဖက်မှုနှင့််ကျောင်းသားကန့်ကွက်မှု. #ဆန္ဒပြကျောင်းသားများ ပန်ကြားချက် | democracy for burma
tags: ဆန္ဒပြကျောင်းသားများ ပန်ကြားချက်, အစိုးရအကြမ်းဖက်မှုနှင့််ကျောင်းသားကန့်ကွက်မှု., Burma, Government, Myanmar, students boycott
အစိုးရအကြမ်းဖက်မှုနှင့််ကျောင်းသားကန့်ကွက်မှု ****************************** ****************************** 2015/3/3–4:00pm(ဆူးလေ) ဒီမိုကရေစီပညာရေးသပိတ် စစ်ကြောင်းအားတားဆီးပိတ်ပင်မှု ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းရန်ကုန် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုကို ကျင့်သုံးမည်ဆိုပါကလက်ရှိအစိုးရရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (ရန်ကုန်ကျောင်သားသမဂ္ဂ) KTS#NLD 2015/3/3–6:19pm Photo : ကိုဝိုင်ဝိုင်ကေ
ဆန္ဒပြကျောင်းသားများ ပန်ကြားချက် ၁- လက်ပံတန်းမှ သာယာဝတီ အထိ သပိတ်စစ်ကြောင်းပုံစံဖြင့် လမ်းလျှောက်ချီတက်မည် ။ ၂- သာယာဝတီမှ ရန်ကုန်အထိ ကိုယ်ပိုင်အစီစဉ်ဖြင့် စီစဉ်ထားသော ကားများနဲ့သွားမည် ။ ၃- ကားများတွင် ကျောင်းသား သမဂ္ဂခွပ်ဒေါင်း အလံ လွှင့်ထူမည် ။ ၄- Viny ချိတ်ဆွဲထားသော ပြန်ကြားရေးကားမှ ကျောင်းသားသီချင်းများ ဖွင့်သွားမည် ။ ၅- ကားတန်းများကို မနှေး မမြန် ပုံမှန် မောင်းနှင်မည် ။. ၆- ရန်ကုန်မြို့ရွှေတိဂုံစေတီပေါ်ရှိ ၁၉၂၀ ပထမ ကျောင်းသား သပိတ်မှောက် – – ကျောက်တိုင်ထူရာ ( သို့ မဟုတ်) ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိ သမဂ္ဂဖြက်ခင်းပြင်သို့– – -အရောက်သွားကာအခမ်းအနားကို အချိန်ခတ္တ ခဏ ကျင်းပကာ – – -လူစုခွဲလျှက် ကိုယ့်အရပ်ဒေသ သို့ ပြန်ပြီး စာမေးပွဲများ ဆက်လက်ဖြေဆိုမည် ။ ၇- မိမိနေရပ် သို့ ပြန်ကြသည့် အခါ ကိုယ့် အစီအစဉ်နှင့် ပြန်ကြမည် ။ ၈- မိမိတို့ ယာဉ်တန်းနှင့် အတူ လုံခြုံရေး ကားများ လိုက်ပါနိုင်သော်လည်း – -မိမိတို့ကားတန်း၏ အရှေ့ နှင့် အနောက် မှ ခပ်ခွာခွာ လိုက်ပါပေးရမည် ။ အထက်ပါ တောင်းဆိုချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် အခု လက်ပံတန်းမှ သာယာဝတီ ထိုမှ တဆင့် ရန်ကုန်သို့ငြိမ်းချမ်းစွာ အိမ်ပြန်ခရီးကို စတင်နေချိန်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားဖြင့် တားဆီးခြင်းများ တွေ့ ကြုံနေရပါသည် ။ မိမိတို့ ခရီးစဉ်သည် လက်နက်မဲ့ ။ အကြမ်းမဖက် ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိမ်ပြန်သော ခရီးဖြစ်သည့် အတွက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားခြင်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်း ဆက်လက် တားဆီးခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာ ညှိုနှိုင်း ဆောင်ရွတ်ပါရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အဖွဲ့ သို့ပန်ကြားလိုက်သည် ။ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး ပင်မ စစ်ကြောင်း Share this:TwitterFacebookPrintPinterestRedditLike this:Like Loading...
from → ဆန္ဒပြကျောင်းသားများ ပန်ကြားချက်, Burma, MYANMAR, STUDENTS
← !! #วันนี้ #ชาวเนตฯ #สนุกสนาน #กันใหญ่ !! #ไม่สวมหมวกกันน็อค”
#MYANMAR #BURMA #Students’ #photo #news #update #4/3/2015 #CLIP →